Xiaomi – Than Dana
Posted on February 24, 2017 September 29, 2018
MIUI Version အသစ္ v8.2.x.x ေတြနဲ႔ Version အေဟာင္းေတြျဖစ္တဲ့ MIUI v8.x.x.x ေတြရဲ႕ကြာျခားခ်က္မ်ား
ၿပီးခဲ့တဲ့ February 16 ရက္ေန႔ကေနစတင္ၿပီး MIUI 8.2 Update (China & Global) ကို Public စတင္ထုတ္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ MIUI 8.2 China Stable ROM ေတြကေတာ့ Devices ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအတြက္ ရရွိေနၿပီးျဖစ္ေပမယ့္ MIUI 8.2 Global Stable ေတြကေတာ့ Devices တခ်ိဳ႕အတြက္သာရရွိပါေသးတယ္ခင္ဗ်ာ။ မၾကာခင္ တပတ္၊ ႏွစ္ပတ္အတြင္းမွာေတာ့ Devices အားလုံးနီးပါးအတြက္ ထုတ္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ MIUIers မ်ားအတြက္ OTA Update မွလည္းေကာင္း၊ MIUI Update News ေတြကိုလည္းေကာင္း ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး တင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
အခုပို႔စ္ေလးကေတာ့ ၎ထြက္ရွိလာတဲ့ MIUI 8.2 မွာ ဘာ Features အသစ္ေတြပါဝင္လာသလဲ ? ယခင္ MIUI 8.0/ 8.1 ေတြနဲ႔ ဘာေတြကြာျခားသြားလဲဆိုတာေတြကို MIUI ခ်စ္သူမ်ားအတြက္ အေသးစိတ္ရွင္းျပေပးတဲ့ ဘာသာျပန္ပို႔စ္တခုျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။
(၁) Toggle positions (Settings > Notifications & status bar > Toggle positions)
Toggle ဆိုတာကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ Xiaomi MIUI 8 ROM မွာ Status bar ကိုဆြဲခ်လိုက္ရင္ေပၚလာတဲ့ Mobile Data/ Wifi/ Touch စသျဖင့္ On/ Off Icons ေလးေတြကိုေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။ ပုံမွန္ဆိုရင္ Toggle icons (၁၁) ခုကို ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။ MIUI 8 ROM မွာ ၎ Toggle icons (၂၀) ခုပါဝင္ၿပီး Status bar မွာ မိမိႏွစ္သက္တဲ့၊ အသုံးလိုတဲ့ Toggle icons (၁၁) ခုကို ေဖာ္ျပေပးရန္အတြက္ Toggle positions ကေနတဆင့္ ေ႐ြးခ်ယ္ေပးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။
(၂) Automated Tasks / New Features of MIUI 8.2 (Security Apps > Automated tasks)
ဒီ Features ကေတာ့ MIUI 8.2 မွာစတင္ပါဝင္လာတဲ့ Features အသစ္တခုျဖစ္ပါတယ္။ Automated Tasks လို႔ေခၚပါတယ္။ သူကဘယ္လိုအလုပ္လုပ္လဲဆိုေတာ့ အခ်ိန္ကာလတခုအတြက္ျဖစ္ေစ၊ ဖုန္းရဲ႕ Battery Level အေပၚမူတည္ၿပီးျဖစ္ေစ System settings တခ်ိဳ႕ကိုအလိုအေလ်ာက္ခ်ိန္းညႇိေပးႏိုင္မယ့္ Features တခုျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ ခ်ိန္းညႇိေပးႏိုင္မယ့္ System settings ေတြကေတာ့ အခ်ိန္ကာလတခုကေန တခုထိ Airplane mode ကို On လုပ္ႏိုင္ျခင္း၊ Battery Level (သို႔မဟုတ္) Timer (သို႔မဟုတ္) မိမိႏွစ္သက္သည့္အခ်ိန္အတိုင္းအတာတခုမွ တခုထိ စသျဖင့္ Silent mode On/ Off ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း၊ Screen brightness အတိုးအေလ်ာ့ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း၊ GPS On/ Off ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း၊ Sync On/ Off ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း၊ Bluetooth On/ Off ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း၊ Airplane mode On/ Off ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း၊ Mobile data On/ Off ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း၊ Wi-Fi On/ Off ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း၊ Vibration mode On/ Off ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း၊ Auto brightness On/ Off ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း၊ Clear memory (Clear cache Device Locked လုပ္ၿပီး အခ်ိန္တခုအတြင္း) ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း စသည္တို႔ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။
(၃) Home Screen Settings (Settings > Home screen)
Home Screen Settings ကလည္း MIUI 8.2 မွာအသစ္ပါဝင္လာတဲ့ Features တခုျဖစ္ပါတယ္။ ၎ Settings မွာပါဝင္တာေတြကေတာ့ မိမိႏွစ္သက္တဲ့ System Launcher ကို Default launcher အျဖစ္ေျပာင္းလဲႏိုင္ျခင္း၊ Home Screen မွာလြတ္ေနတဲ့ Cells ကြက္ေတြကို Auto ျဖည့္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း နဲ႔ Home Screen layout ကို Locked လုပ္ႏိုင္ျခင္းတို႔ပါဝင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။
ဒါ့အျပင္ MIUI China ROM မွာပဲပါဝင္တဲ့ Features တခုရွိပါေသးတယ္၊ အဲ့ဒါကေတာ့ Smart Assistant Features ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ၎ Features ဟာ Home screen page လိုမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ၎ layout page မွာ အသုံးမ်ားတဲ့ Apps ေတြနဲ႔အတူ အျခားေသာအသုံးဝင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကိုေထာက္ပံ့ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ မိမိေပၚေစခ်င္တဲ့ Apps ရဲ႕ Notifications ေတြကိုလည္းေဖာ္ျပေပးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ၎ Features ဟာ Global Users ေတြအတြက္သိပ္အသုံးမဝင္တဲ့အတြက္ MIUI China ROM မ်ားတြင္သာပါဝင္မွာျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။
(၄) Battery Saver Toggle (Security Apps > Battery > Battery)
Xiaomi ဖုန္းအသုံးျပဳသူအမ်ားစုအေနနဲ႔ Battery Saver ဆိုတဲ့ MIUI Features ကိုေတာ့သိၾကမယ္ထင္ပါတယ္။ ဟုတ္ကဲ့ အခု MIUI 8.2 Update မွာဆိုရင္ ၎ Features အတြက္ Toggle settings မွာ အလြယ္တကူ On/ Off ျပဳလုပ္ႏိုင္ေစရန္ Icon သက္သက္ထည့္ေပးထားၿပီပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ Battery Saver Mode ကို ယခင္လို Security Apps ထဲမွာသြားၿပီး On/ Off လုပ္ေနရန္မလိုအပ္ပဲ Notifications and status bar မွတဆင့္ Toggles Icons ေလးေတြကေန အလြယ္တကူပဲ On/ Off ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။
(၅) Virus Scanning on 3rd Party Apps (MIUI 8.2 New Features)
MIUI 8.2 မွာအသစ္ပါဝင္လာတဲ့ ေနာက္ထပ္ Features အသစ္တခုကေတာ့ က်ေနာ္တို႔အသုံးျပဳေနတဲ့ Xiaomi ဖုန္းေတြမွာ Android Applications ေတြကို Install ျပဳလုပ္ၾကပါတယ္။ အဲ့လိုလုပ္ၾကတဲ့အခါ နည္းလမ္းမ်ိဳးစုံအသုံးျပဳၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ေတြက Xender (or) Zapya လို File Sharing Apps ေတြနဲ႔ ဖုန္းတလုံးနဲ႔တလုံး Sharing ျပဳလုပ္ၿပီ Installed ျပဳလုပ္ၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ေတြက Android Apps Store ျဖစ္တဲ့ Google Play Store ကေန Download လုပ္ၿပီး Installed လုပ္ၾကပါတယ္။ အဲ့ဒီလို Google Play Store (သို႔မဟုတ္) Mi Apps Store ေတြကေန Download လုပ္ၿပီး Installed ျပဳလုပ္တဲ့ Apps မဟုတ္ပဲ အျခား Website ေတြနဲ႔ အျခား Copy & Paste လုပ္ၿပီး Installed လုပ္တဲ့ Apps ေတြကို 3rd Party Apps ေတြလို႔ေခၚပါတယ္။ အခု Features က ၎ 3rd Party Apps ေတြကို Install ျပဳလုပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ Install မလုပ္ခင္ ၎ Apps မွာ Virus (or) Malware ေတြပါဝင္၊ မပါဝင္ စစ္ေဆးတဲ့ Features ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ အရမ္းေကာင္းမြန္ၿပီး အသုံးဝင္လိုအပ္တဲ့ Features တခုျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။
(၆) New Icons (USB Charging & Changing Keyboard)
ေနာက္ထပ္ MIUI 8.2 မွာ အသစ္ေျပာင္းလဲထားတာေလးရွိပါေသးတယ္၊ ဒါကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဖုန္းေတြကို Charging သြင္းတဲ့အခ်ိန္ Notifications bar မွာေပၚတဲ့ Charging (__%) ဆိုတဲ့ Icons ပုံစံေျပာင္းလဲထားပါတယ္။ ေနာက္တခုကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ဖုန္း Keyboard နဲ႔ စာ႐ိုက္ေနစဥ္မွာ Notifications bar မွာေပၚတဲ့ Change Keyboard ဆိုတဲ့ Icons ကိုလည္းေျပာင္းလဲထားတာေတြ႕ရပါတယ္ခင္ဗ်ာ။
(၇) Others Features and Bugs Fixed
ဟုတ္ၿပီ MIUI 8.2 Update မွာ အေပၚက Features ေတြပဲလားဆိုေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ အျခားေသာ ယခင္ Version ေတြမွာ အဆင္မေျပတဲ့ Bugs (Error) ေတြကိုလည္း Fixed လုပ္ေပးထားပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ MIUI ROM အတြက္ Feedback Apps ကိုလည္း ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ျပဳလုပ္ေပးထားတာျဖစ္ၿပီး အျခားေသာ System ပိုင္းဆိုင္ရာေတြကိုလည္း ထည့္သြင္းျပင္ဆင္မႈေတြျပဳလုပ္ထားပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ Xiaomi ရဲ႕ MIUI ROM အသုံးျပဳသူ Users မ်ားအားနည္းတာတခုရွိပါတယ္။ အဲ့ဒါကေတာ့ MIUI ROM Update ကို ထုတ္ေပးရင္ ပုံမွန္လုပ္ေပးရမယ္ဆိုတာကို အသိအားနည္းၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ အမွန္ေတာ့ MIUI Update ဆိုတာ Version တခုမွာ Bugs (Errors) ရွိေနၿပီဆိုရင္ Fixed လုပ္ၿပီး (သို႔မဟုတ္) New Features အသစ္ေတြထပ္ထည့္တဲ့အခါ Update ေတြအေနနဲ႔ ထုတ္ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ MIUI အသုံးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ MIUI Update ေတြကိုပုံမွန္ျပဳလုပ္ေပးဖို႔လိုအပ္တယ္ဆိုတာကို အသိေပးေျပာခ်င္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ မိမိအသုံးျပဳလ်က္ရွိတဲ့ MIUI ROM ဟာ Beta ROM (Developer ROM) ျဖစ္တယ္ဆိုရင္ အပါတ္စဥ္ ေသာၾကာေန႔တိုင္း Update ထုတ္ေပးတာျဖစ္ၿပီး တပါတ္တႀကိမ္ Update ျပဳလုပ္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ မိမိအသုံးျပဳတဲ့ MIUI ROM ဟာ Stable ROM ျဖစ္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ရံဖန္ရံခါထုတ္ေပးတဲ့ Update ကို (၁) လတႀကိမ္ (သို႔မဟုတ္) (၂) လတႀကိမ္ ျပဳလုပ္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။
Posted on February 13, 2017 December 22, 2018
Xiaomi ဟာ Xiaomi Devices တွေကို ဘာကြောင့် Bootloader Locked လုပ်ခဲ့တာလဲ ?
Xiaomi (Mi) ဟာဆိုရင်အခုဆို နိုင်ငံတကာကိုတင်ပို့ရောင်းချနေတဲ့ Brand တခုအဖြစ်ရပ်တည်နေတာဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာမှာ စတုတ္ထမြောက်အကြီးဆုံး Smartphone ထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လို့ လက်ရှိမှာတော့ အချို့နိုင်ငံတွေကိုသာတင်ပို့ရောင်းချနေလျက်ရှိပြီး နိုင်ငံတကာဈေးကွက်ကိုရောင်းချနိုင်ဖို့အတွက် ဈေးကွက်ချဲ့ထွင်လျက်ရှိနေဆဲအခြေအေနေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Xiaomi အသုံးပြုသူများအတွက် တိကျမှန်ကန်စွာဝယ်ယူနိုင်ဖို့အတွက် စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းတွေနဲ့ တချို့တွေအတွက် Xiaomi Cloned (Fake Mi Phones) ဖုန်းတွေဝယ်ယူမိနိုင်တဲ့ အခြေအနေတချို့ရှိနေပြန်ပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီဖြစ်စဉ်တွေဟာ Customer Service ကောင်းမွန်ပြီး၊ After sales service ကောင်းမွန်တဲ့ ဖုန်းဆိုင်ကြီးတွေမှာတော့ ကြုံတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အခုမှ Xiaomi ဖုန်းတလုံးစတင်အသုံးပြုဝယ်ယူမည့်သူများအတွက်တော့ မေးမြန်းစုံစမ်းပြီး စနစ်တကျဝယ်ယူတတ်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
တချို့ပြည်တွင်းဈေးကွက်ဝင်လာတဲ့ Xiaomi ဖုန်းတွေမှာဆိုရင် UnOfficial Custom ROM တွေနဲ့ Bloatware (ဖုန်းအသုံးပြုသူအတွက် အသုံးမဝင်သော၊ RAM, ROM Space မလိုအပ်ပဲအသုံးပြုနေတတ်သော Apps များ) တွေပါဝင်တဲ့ ဖုန်းတွေလည်း ဈေးကွက်မှာရှိတတ်ပါတယ်။ ဒါတွေဟာ Xiaomi ဖုန်းအစစ်တလုံးဖြစ်ပေမယ့် ပြည်တွင်းသို့တင်သွင်းတဲ့ Suppliers တွေဘက်ကနေထည့်သွင်းပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်တကယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီလိုပါဝင်လာတဲ့ ROM တွေကို သက်ဆိုင်ရာရောင်းချပေးတဲ့ ဖုန်းဆိုင်များအနေဖြင့် Official Stable ROM တွေကိုပြန်လည်တင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အဲ့လိုမဟုတ်ပဲ ဖုန်းမှာပါတဲ့အတိုင်း အသုံးပြုသူများထံရောင်းချတဲ့အခါ အသုံးပြုသူများအတွက် အသုံးပြုရတာမလိုအပ်သောခက်ခဲမှုမျိုးကိုကြုံတွေ့ရစေပါတယ်။
အဲ့ဒီလို UnOfficial Custom ROM တွေကြောင့်ပဲ အခန့်မသင့်လို့ Malware တွေပါဝင်လာခဲ့ရင် အသုံးပြုသူရဲ့ဖုန်းအတွင်းမှာ (Eg; Mobile Banking) လိုစနစ်မျိုးအသုံးပြုတာမျိုးအတွက် အန္တရာယ်ရှိနိုင်တာမျိုးတွေရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုပြဿနာမျိုးဟာ လက်ရှိမှာ တရုတ်ဈေးကွက်အတွင်းမှာတောင်မှ ရှိနေဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။
အခြားပြဿနာတခုကတော့ မတော်တဆ မိမိတို့ရဲ့ဖုန်းပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ရင်သော်လည်းကောင်း၊ မိမိတို့ရဲ့ဖုန်းအခိုးခံရရင်သော်လည်းကောင်း၊ အဲ့ဒီဖုန်းရရှိသွားသူဟာ အလွယ်တကူပဲ ကိုယ်တိုင်သော်လည်းကောင်း၊ အခြားဖုန်းဆိုင်များတွင်သော်လည်းကောင်း MIUI ROM အသစ်ပြန်တင်ပြီးအသုံးပြုရင် ဖုန်းအသစ်တလုံးလိုအလွယ်တကူအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဖုန်းပျောက်ဆုံးသူဟာ သူ့ရဲ့ဖုန်းကိုပြန်ရဖို့အတွက် ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် အင်မတန်မှနည်းပါးလွန်းပါတယ်။ (လက်ရှိမှာ Bootloader Locked Devices အပါအဝင် လုံခြုံရေးမြင့်မားပါပြီဆိုတဲ့ Apple Devices တွေတောင်မှ ပျောက်ဆုံးခဲ့ရင် ပြန်ရဖို့ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ အင်မတန်နည်းပါးပါတယ်) ။
အဲ့ဒီလိုနဲ့ MIUI Developer ROM version update တခုမှာစတင်ပြီး Xiaomi ဖုန်းတလုံးကို System wipe (Flash All) လုပ်ပြီး ပြန်လည်အသုံးပြုရင် Mi Account Info တောင်းတဲ့ Features တခုကိုစတင်ထည့်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Fastboot Method (MIUI ROM Flashing Methods) ကိုကောင်းမွန်စွာအသုံးပြုတတ်တဲ့သူတယောက်ကိုတော့ ဒီနည်းလမ်းဟာအသုံးဝင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
ဒါတွေကြောင့်ပဲ Xiaomi ဟာ သူ့ရဲ့ဖုန်းတွေကို Bootloader Locked လုပ်ဖို့ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Mi Cloud ရဲ့ Find Device function ကိုလည်းပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး System update မှတဆင့်အတည်ပြုတဲ့စနစ်ကိုလည်းပိုမိုကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီနည်းစနစ်တွေကြောင့် Xiaomi ဖုန်းအသုံးပြုသူတို့ရဲ့ User data (Personal data) တွေဟာပိုပြီးလုံခြုံမှုရှိစေသလို အသုံးပြုသူအတွက်လည်း ပိုမိုအဆင်ပြေစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
Bootloader Locked မှာ ဘာတွေပြောင်းလဲသွားမလဲ?
Bootloader Lock ကြောင့် ပုံမှန်ပြုလုပ်ရတဲ့ OTA Update တွေမှာသက်ရောက်မှုရှိစေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ Bootloader Locked ဖြစ်နေခဲ့ရင် ယခင် MIUI China Developer ROM တွေမှာပါဝင်တဲ့ Root စနစ်ဟာ Locked ဖြစ်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက် အသုံးပြုလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ၎င်းကိုအသုံးပြုချင်ပါက မိမိတို့ဖုန်းကို အရင်ဆုံး Bootloader Unlock ပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
Mi Recovery Mode ကိုလည်းပြုပြင်ပြောင်းလဲထားပါတယ်။ Mi Recovery ကိုအသုံးပြုပြီး Recovery package file တွေနဲ့ Flash လုပ်ဖို့ရန် Mi PC Suite ကိုအသုံးပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
Bootloader Locked ဖြစ်နေရင် Fastboot ROM အသုံးပြုပြီး Fastboot Mode မှ Mi Flash Tool အသုံးပြုပြီး Flash လုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ထိုကဲ့သို့လုပ်ဆောင်ဖို့ရန် အရင်ဆုံး Bootloader Unlock ပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
Xiaomi ရဲ့ Bootloader Locked ပြုလုပ်ခြင်းဟာ အသုံးပြုသူ Users များအတွက်ပိုမိုအဆင်ပြေစေရန်အတွက်သာပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက် Xiaomi ဖုန်းတလုံးကို နည်းလမ်းစုံအောင်ကလိတတ်သူများနဲ့ အဆင့်မြှင့်တင်မှုပြုလုပ်သူတွေအတွက် အတားအဆီးတခုဖြစ်နေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုတတ်သူများအတွက် Bootloader Unlock ပြုလုပ်တဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့၊ နည်းစနစ်တွေကို ဆောင်ရွက်ထားပေးပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Bootloader Unlock ပြုလုပ်ပြီးပါက ဟိုးယခင်လိုပဲ Bootloader Locked မပြုလုပ်ခင်ကလိုပဲ မိမိတို့ဖုန်းကို စိတ်ကြိုက်ကလိနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုပြောလို့ Bootloader Unlock ပြုလုပ်တာခက်ခဲသလားဆိုတော့လည်း မခက်ခဲပါ။ အရမ်းကိုလွယ်ကူရိုးရှင်းပါတယ်။
Bootloader Unlock ပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာ အဓိကလိုအပ်တာကတော့ Unlock Password ရယူဖို့ရန်အတွက် အင်တာနက်ကော်နက်ရှင်လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မိမိဖုန်းမှာ Signed In ပြုလုပ်ထားတဲ့ Mi Account နဲ့ Unlock ပြုလုပ်ဖို့ရန်အသုံးပြုမည့် Unlock Tool မှာ Sign In ဝင်မည့် Mi Account တို့ဟာ တူညီနေဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုတူညီမှုမရှိရင်တော့ Bootloader Unlock ပြုလုပ်ခြင်းအောင်မြင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလိုနည်းလမ်းတွေကြောင့်ပဲ မိမိတို့ရဲ့ဖုန်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ မိမိတို့ရဲ့ Personal data တွေကိုလုံခြုံမှုပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
(သတိပြုရန်။ သင်ဟာ Android အကြောင်းကိုနားမလည်ဘူးဆိုရင် (သို့မဟုတ်) MIUI ROM Flashing နဲ့ Custom ROMs တွေအကြောင်းကို အခြေခံလောက်မှ မသိနားမလည်ဘူးဆိုရင် Bootloader Unlock ပြုလုပ်ဖို့ရန်အတွက် အားမပေးပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အတွေ့အကြုံမရှိပဲ မှားယွင်းလုပ်ဆောင်မှုတွေကြောင့် မိမိဖုန်းကို ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်စေနိုင်သလို၊ မိမိဖုန်းအတွင်းရှိ Personal data တွေလည်း မဆုံးရှုံးသင့်ပဲ ဆုံးရှုံးရစေနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။)
Posted on February 12, 2017 December 22, 2018
MIUI Stable, Developer, Ported, Global, China, Recovery, Fastboot ROMs များအကြောင်း
May 10, 2016 မှာ Xiaomi ရဲ့ Co-founder ဖြစ်သူ Hong Feng မှ MIUI 8 ကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ May 16, 2016 ရက်နေ့မှာ MIUI Global Forum မှာ Special Team Members (၉၀) ခန့်ခေါ်ယူပြီး ၎င်း MIUI 8 အတွက် ပထမဆုံးအဆင့်စတင်စမ်းသပ်သုံးစွဲဖို့ ခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါ ခေါ်ယူမှုမှာ Special Team Members (၇၀) ပါဝင်ခဲ့ပြီး လက်ရှိ MIUIers တို့အသုံးပြုလျက်ရှိတဲ့ MIUI 8 ROM တွေကို အဆင်ပြေပြေအသုံးပြုနိုင်စေရန် စမ်းသပ်အသုံးပြုခဲ့ကြပြီး MIUI Developer Team မှလိုအပ်သည်များအဆင့်ဆင့်ပြင်ဆင်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုနဲ့ June 1, 2016 မှာ MIUI Team မှ MIUI 8 China Alpha ROM ကို Public ဖြန့်ချီပေးခဲ့ပြီး MIUIers တိုင်းကိုစမ်းသပ်အသုံးပြုစေခဲ့ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့ MIUI Alpha ROM အဆင့်ကို Daily update တွေနဲ့ အဆင့်ဆင့်စမ်းသပ်၊ ပြင်ဆင်ခဲ့ကြပြီး June 14, 2016 ရက်နေ့မှာတော့ Special Team Members တွေကို MIUI 8 China Developer ROM (Beta ROM) ကိုစမ်းသပ်အသုံးပြုစေပြီး June 17, 2016 ရက်နေ့မှာတော့ MIUI 8 China Developer (Beta ROM) ကို Public ဖြန့်ချီပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
MIUI 8 China Beta ROM ကို Public ပေးသုံးပြီးနောက်မှာတော့ MIUI 8 Global Beta ROM ကို July 11, 2016 ရက်နေ့မှာ Public ထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီလို MIUI 8 Global Beta ROM ကို Public ထုတ်ပေးခဲ့ပြီးနောက် MIUI 8 Global Beta (6.7.21 Update) မှာ မြန်မာပြည်မှ MIUIers များအတွက် အသုံးပြုရအဆင်ပြေစေရန်အတွက် ZawgyiX1 ဆိုတဲ့ MIUI Theme Font ကိုစတင်ထည့်သွင်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ထိုကဲ့သို့ MIUI 8 Alpha/ Beta ROM တွေ အဆင့်ဆင့်စမ်းသပ်အသုံးပြုခဲ့ကြပြီး လိုအပ်တာများအဆင့်ဆင့်ပြင်ဆင်ခဲ့ပြီးနောက် August 16, 2016 ရက်နေ့ညပိုင်းမှစတင်ပြီး Xiaomi ဖုန်းအသုံးပြုသူ (၃၀%) ကို MIUI 8 China Stable ROM (OTA Update) များစတင်ထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုပဲ August 19, 2016 ရက်နေ့မှာ MIUI 8 Global Stable ROM (OTA Update) များကို Xiaomi အသုံးပြုသူ (၃၀%) ကိုစတင်အသုံးပြုစေခဲ့ပါတယ်။ ဒါတွေအပြီးမှာတော့ August 23, 2016 ရက်နေ့မှာတော့ MIUI 8 China/ Global Stable ROM တို့ကို Public ထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဒါ့အပြင် Xiaomi ရဲ့ ရောင်းအားအကောင်းဆုံးနဲ့ လူကြိုက်အများဆုံး Series တခုဖြစ်တဲ့ Redmi series ရဲ့ လူကြိုက်အများဆုံးသော Redmi Note3Pro (SD) အတွက် Android 6.0 Based MIUI 8 China/ Global Beta ROM ကို September 9, 2016 ရက်နေ့မှာ ထုတ်လုပ်ပေးခဲ့ပြီး ၎င်း Update မှာတော့ Redmi Note3Pro ဟာ ၎င်းတွင်ထည့်သွင်းအသုံးပြုထားတဲ့ Qualcomm Chipset supported ကြောင့် Dual SIM/ Active (DSDA) Feature စတင်ပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ… ဒီလောက်ဆိုရင် ကျနော်တို့လက်ရှိအသုံးပြုနေကြတဲ့ MIUI 8 ရဲ့ စတင်ခဲ့ပုံနဲ့ MIUI ROM တွေရဲ့ အဆင့်ဆင့်လုပ်ဆောင်ချက်တွေအကြောင်းကို သဘောပေါက်လောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဆက်လက်ပြီးမှာ MIUI ROM အသုံးပြုသူတွေအနေနဲ့ မိမိဟာ MIUI Developer ROM (Beta ROM) နဲ့ အသုံးပြုသင့်သလား? (သို့မဟုတ်) MIUI Stable ROM ကိုအသုံးပြုသင့်သလား? Developer ROM နဲ့ Stable ROM တို့ရဲ့ကွဲပြားခြားနားချက်တွေကဘာတွေလဲ? MIUI Ported ROM ဆိုတာကရောဘာလဲ? Fastboot ROM နဲ့ Recovery ROM တွေကိုဘယ်လိုခွဲခြားမလဲ? စသဖြင့် အကြောင်းစုံကို Myanmar MIUIers တို့အတွက် ရှင်းပြချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
MIUI Stable ROM ဆိုတာဘာလဲ ?
Xiaomi MIUI Stable ROM ဆိုတာ MIUI Team ရဲ့ Official Developers တွေကနေပြုလုပ်ပေးထားတဲ့ Redefined Android တမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် တလတကြိမ် လစဉ် Update ထုတ်ပေးပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပဲ တခါတလေကျရင်တော့ MIUI ROM ရဲ့ Bugs (Error) ပြုပြင်ရတဲ့အချိန်ကြာမြင့်မှုအပေါ်မူတည်ပြီး တလထက်ကြာတတ်တာမျိုးလည်းရှိတတ်ပါတယ်။ MIUI Stable ROM ဆိုတာ MIUI ROM Bugs (Errors) အနည်းဆုံးသော ROM လည်းဖြစ်ပါတယ်။ Xiaomi ဖုန်းအသုံးပြုသူတယောက်ဟာ Error လည်းကင်းရှင်းချင်တယ်၊ MIUI Features အသစ်တွေကိုလည်း ချက်ခြင်းစမ်းသပ်အသုံးမပြုချင်ဘူးဆိုရင်တော့ Normal User တယောက်အနေနဲ့ MIUI Stable ROM ဆိုတာအသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီ MIUI Stable ROM တွေကို Version အလိုက်အမည်ရွေးချယ်ပေးထားတာနဲ့ပါတ်သတ်ပြီးရှင်းပြချင်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာ MIUI 8 ထွက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် MIUI 8 Stable ROM နဲ့ရှင်းပြပါမယ်။ သာမာန်အားဖြင့် MIUI Stable ROM ရဲ့ Version ကို V8.X.X.0.XXXXXXX ဆိုပြီးဖော်ပြပါတယ်။ ပထမဆုံး X နှစ်လုံးကိုတော့ MIUI ရဲ့ Version နဲ့ Revision number ကိုဖော်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့အခြား X (၇) လုံးကိုတော့ Android version, Phone model, နဲ့ China ROM လား? Global ROM လား? စသဖြင့်ဖော်ပြပေးပါတယ်။
ဒါ့အပြင် မတူညီတဲ့နိုင်ငံတိုင်းအတွက် codenames တွေဖော်ပြဖို့အတွက် ရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့ဖော်ပြမှုမျိုးသတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်။ MIUI ROM version မှာ MI ဆိုပြီးပါဝင်ရင် အဲ့ဒီ ROM ဟာ Global market အတွက် MIUI Global ROM ဖြစ်ပြီး CN ဆိုရင်တော့ China ROM လို့သတ်မှတ်ပါတယ်။ MIUI Stable ROM တွေမှာ အသုံးပြုရင်းနဲ့ Bugs (Error) တခုခုရှိခဲ့ရင်လည်း MIUI ROM မှာ Built-in ပါဝင်တဲ့ Bug Report Apps မှတဆင့် MIUI Team ကို Feedback လုပ်နိုင်ပါတယ်။ တခါတရံမှာ MIUI Stable ROM အသုံးပြုတဲ့ အခြား Xiaomi ဖုန်းတွေမှာ Update မရပဲ သင့်ဖုန်းမှာပဲ MIUI Stable ROM Update ရနေတာမျိုးလည်းရှိတတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့တခြားမဟုတ်ပါဘူး Grey update လို့ခေါ်တဲ့ Beta-testing အတွက် Random ထုတ်ပေးတဲ့ Public MIUI Stable ROM Update ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Xiaomi Mi3Device အတွက် နောက်ဆုံးထုတ်ပေးခဲ့တဲ့ China Stable ROM Version ဟာ V7.5.6.0.MXDCNDE ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ ROM version ကိုရှင်းပြရရင် –
V7 ဆိုတာ MIUI7ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်
5.6 ဆိုတာကတော့ ၎င်း MIUI version ရဲ့ 5th major update နဲ့ 6th minor revision ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်
MXD ဆိုတာကတော့ Android Marshmallow 6.0.1 ကိုပြောတာပါ
CN ဆိုတာက China ROM ကိုပြောတာပါ
DE ဆိုတာကတော့ Mi 3/4W/CDMA ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။
MIUI Developer ROM ဆိုတာဘာလဲ?
MIUI Developer ROM ကို MIUI Beta ROM လို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ ၎င်း MIUI Developer ROM တွေကို MIUI Team ရဲ့ Official Developers တွေကနေပြုလုပ်ပေးထားတဲ့ Redefined Android ပဲဖြစ်ပါတယ်။ MIUI Developer ROM တွေကို အပါတ်စဉ် Weekly update ထုတ်လုပ်ပေးတာဖြစ်ပြီ ပုံမှန် Update changelog တွေနဲ့ ၎င်း changelog preview တွေကို MIUI Global Forum (en.miui.com/forum.php) မှာ ၎င်း Developer ROM အတွက်ကြိုတင်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ Developer ROM တွေဟာ New Features တွေလည်းပါဝင်လာတတ်သလို Weekly Update ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် Bugs (Errors) ပါဝင်နိုင်တဲ့ရာခိုင်နှုန်းများပါတယ်။ ဒါကြောင့် Xiaomi ဖုန်းတလုံးတည်းအသုံးပြုတဲ့ Normal User တယောက်အနေနဲ့တော့ Developer ROM ကိုအသုံးမပြုသင့်ပါဘူး။
Developer ROM တွေရဲ့အမည်ပေးသတ်မှတ်ပုံကတော့ရိုးရှင်းပါတယ်။ X.Y.Z လို့ပဲသတ်မှတ်ကြည့်ရအောင်။ X ဆိုတာကတော့ ROM ထုတ်ပေးတဲ့ ခုနှစ်ကိုဆိုလိုပါတယ်။ (ဥပမာ –6ဆိုပါစို့၊ 2016 ကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ Y ဆိုတာကတော့ ROM ထုတ်ပေးတဲ့ လကိုပြောချင်တာဖြစ်ပြီး Z ဆိုတာကတော့ ၎င်း ROM ထုတ်ပေးတဲ့ နေ့ရက်ကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာတခုပြောစရာရှိတာက အဆိုပါ Developer ROM တွေမှာပဲ Special Team Members တွေအတွက်သာသီးသန့်ထုတ်ပေးတဲ့ Incrememtal ROM package နဲ့ Update ပေးတဲ့ Daily update ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီ Update တွေမှာ Changelog preview မှာပါဝင်တဲ့ Features အသစ်တွေနဲ့ Bugs (Error) ပြင်ဆင်မှုတွေ ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သလားဆိုတာကို စမ်းသပ်အသုံးပြုခိုင်းပြီးမှ အပါတ်စဉ် သောကြာနေ့တိုင်း Developer ROM (Weekly update) ကိုထုတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။
MIUI Ported ROM ဆိုတာဘာလဲ?
MIUI Ported ROM တွေကို UnOfficial Developers (သို့မဟုတ်) 3rd party developers တွေကနေပြုလုပ်ပေးတာဖြစ်ပြီး MIUI Developer ROM ကိုအခြေခံပြီးပြုလုပ်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း Ported ROM တွေကို MIUI Developer ROM တွေရဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့ ခုနှစ်၊ လ၊ ရက် တွေလိုပဲ အမည်ပေးကြပြီး MIUI Developer ROM ထုတ်လုပ်ပေးတဲ့ ရက်စွဲထပ်တော့နောက်ကျပြီးမှ ထုတ်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ၎င်းင် Ported ROM တွေမှာ MIUI Developer ROM တွေထပ် Bugs (Error) တွေပိုမိုပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ ၎င်း Ported ROM တွေဟာ Xiaomi Device များအတွက်ထုတ်လုပ်တာမျိုးမဟုတ်ပဲ အခြားသော Devices (ဥပမာ- Google Nexus, HTC, Oppo, etc… ) များအတွက် MIUI အသုံးပြုချင်သူများသုံးနိုင်စေရန် ထုတ်လုပ်ပေးတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။
၎င်း Ported ROM အသုံးပြုသူတွေဟာ Bugs (Error) ရှိခဲ့ရင် အဆိုပါ Ported ROM ပြုလုပ်တဲ့ Developer ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ရမှာဖြစ်ပြီး အချို့သော Developer တွေက ၎င်း Bugs (Error) များအတွက် ပြင်ဆင်မှုပြုလုပ်ပြီး Incrememtal ROM package တွေထုတ်ပြီး Update ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင်တော့ MIUI 8 အတွက် ၎င်း Ported ROM တွေကို MIUI Team ရဲ့ Source code တွေကိုထုတ်လုပ်ပေးခြင်းမပြုလုပ်တော့တဲ့အတွက် အခြားပြင်ပ 3rd party developers တွေအနေနဲ့ပြုလုပ်နိုင်ခြင်းမရှိတော့ပဲ MIUI Developer Team (Buggy) ကသာရံဖန်ရံခါပြုလုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာတဝန်းမှာရှိတဲ့ Xiaomi ဖုန်းအသုံးပြုသူတွေဟာ မကြာခဏဆိုသလိုပဲ MIUI China ROM အသုံးပြုဖို့အတွက် လုံခြုံမှုရှိရဲ့လား? အသုံးပြုမယ့် Device အတွက် အဆင်ပြေပါ့မလား? စသဖြင့် စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေရှိတတ်ကြပါတယ်။ ဒီနေရာမှာတခုပြောလိုတာက အဲ့ဒီလိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေဖြစ်စရာမရှိပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ MIUI China ROM ဟာလည်း MIUI Global ROM လိုပဲ Xiaomi ဖုန်းတလုံးမှာ အဆင်ပြေပြေ ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် MIUI China ROM နဲ့ MIUI Global ROM တို့ရဲ့ကွဲပြားခြားနားပုံကိုရှင်းပြလိုပါတယ်။ MIUI China Stable ROM နဲ့ MIUI Global Stable ROM တို့ကို အလွယ်အားဖြင့် အမည်ပေးသတ်မှတ်ထားတဲ့ပုံစံကတော့ MIUI Version မှာ CN ဆိုရင် MIUI China ROM ဖြစ်ပြီး MI ဆိုရင်တော့ MIUI Global ROM ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း ROMs နှစ်မျိုးရဲ့ကွဲပြားခြားနားပုံတွေကတော့ –
MIUI China ROM (CN)
MIUI China ROM မှာ Google Apps တွေနဲ့ Google Services (GApps) တို့ပါဝင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ ဒါ့အပြင် ၎င်း MIUI China ROM တွေမှာ China Apps တွေနဲ့ တရုတ်ပြည်တွင်းသုံး Service တွေပါဝင်ပါတယ်။ ဒါတွေဟာ အခြားနိုင်ငံကအသုံးပြုသူများအတွက်တော့ အသုံးမဝင်သော Apps (Bloatware) များဖြစ်ပြီး တရုတ်ပြည်တွင်းနဲ့ တရုတ်လူမျိုးများအတွက်ကတော့ အရမ်းကိုအသုံးဝင်တဲ့ Apps တွေဖြစ်ပါတယ်။ MIUI China ROM တွေမှာ Google Apps (GApps) Google Apps, Google Service Frameworks, Google Account Manager နဲ့ Google Play Services တွေကို အလွယ်တကူပဲ Installed ပြုလုပ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် MIUI China ROM တွေဟာ သူ့မှာ Copyright ပြဿနာတွေနဲ့ Global Market ထပ်ကန့်သက်ချက်တွေနည်းပါးတဲ့အတွက် MIUI Global ROM တွေထပ် Features တွေပိုမိုစုံလင်ပါဝင်ပါတယ်။ MIUI China ROM မှာ English Language Translation နဲ့ပါတ်သတ်ပြီး ROM ရဲ့အချို့အပိုင်းတွေမှာ ပြည့်ပြည့်စုံစုံမပြီးတာမျိုးရှိတတ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အချို့သော Google integration သုံးတဲ့ Apps တွေထည့်သွင်းရာမှာလည်း အခက်အခဲတချို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကမ္ဘာတဝန်းမှာရှိတဲ့ နိုင်ငံတွေက Xiaomi အသုံးပြုသူများအဓိကအသုံးပြုတဲ့ ROM ကိုခေါ်ပါတယ်။ ၎င်း MIUI Global ROM မှာ Google Apps (GApps) တွေတပါးတည်းပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မည်သည့် China Apps/ Services များလည်းပါဝင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ ပုံမှန်အားဖြင့် ၎င်း MIUI Global ROM တွေကို MIUI China ROM တွေထုတ်လုပ်ပေးပြီး နောက်ပိုင်းရက်တွေမှာထုတ်လုပ်ပေးတတ်ပါတယ်။ MIUI Global ROM မှာ English language ဟာ Default အဖြစ်ပါဝင်လာပြီး အခြားသော နိုင်ငံများမှ Languages များလည်းပါဝင်တဲ့အတွက် စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Google Apps တွေတစ်ပါးတည်းပါဝင်လာတာကြောင့် MIUI ROM ရဲ့အချို့ Features တွေဖြစ်တဲ့ Online Music နဲ့ Xunlei Download Accelerator တို့ကိုတော့ အသုံးပြုနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် MIUI China ROM လို Bloatware တွေပါဝင်လာခြင်းမရှိတဲ့အတွက် Internal Storage နေရာများများလွတ်လပ်စေပါတယ်။ MIUI Global ROM ဟာ ပုံမှန်အားဖြင့် MIUI Stable ROM အဖြစ်သာထုတ်လုပ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာတော့ Redmi 1s မှစတင်ပြီး MIUI Beta ROM တွေထုတ်လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အခုဆိုရင်တော့ Xiaomi Devices တိုင်းလိုလိုအတွက် MIUI Global Beta ROM တွေ ကို MIUI Developer Team မှ ထုတ်လုပ်ပေးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ တခုပြောစရာရှိတာက ၎င်း MIUI Global ROM တွေဟာ Multi-language ပါဝင်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်လည်း MIUI China ROM များထပ် ROM package size ပိုမိုကြီးတာဖြစ်ပါတယ်။
Recovery ROM (သို့မဟုတ်) Fastboot ROM ဆိုတာဘာတွေလဲ? သူတို့ကိုဘယ်လိုသုံးရလဲ?
MIUI Recovery ROM တွေဟာ (.zip file format) ဖြင့်လာပြီး Fastboot ROM တွေဟာ (.tgz file format) နဲ့လာတာဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်မျိုးစလုံးဟာ Xiaomi ဖုန်းအတွက် ROM တင်ဖို့အတွက်ရန် အသုံးပြုတာဖြစ်ပြီး MIUI ROM ချင်းအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၎င်းမတူညီတဲ့ ROM နှစ်မျိုးအတွက် ROM Flash လုပ်တာနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ Recovery ROM တွေကို များသောအားဖြင့် လက်ရှိအသုံးပြုလျက်ရှိတဲ့ ROM ကိုဖြစ်စေ (သို့မဟုတ်) ဖုန်းထဲက Data တွေကိုမပျက်စေပဲ Update လုပ်ရန်ဖြစ်စေ အသုံးပြုပါတယ်။ Fastboot ROM တွေကိုတော့ Computer အသုံးပြုပြီး Flash ရတာဖြစ်ပြီး Xiaomi ဖုန်းတလုံး System break ဖြစ်ခဲ့ရင်ဖြစ်စေ၊ Full ROM Flash All လုပ်လိုသည်ဖြစ်စေ အသုံးပြုပါတယ်။ ဒီနေရာမှာတခုပြောလိုတာက Fastboot ROM အသုံးပြုဖို့အတွက် Normal user တယောက်အနေနဲ့ကတော့ လေ့လာမှုတချို့ပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်ပြီး Computer အသုံးပြုမှုအခြေခံပိုင်းတွေလိုအပ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ရင် မှားယွင်းလုပ်ဆောင်မိတာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Recovery ROM ဖြင့် Flash လုပ်ခြင်းဆိုတာဘယ်လိုလဲ?
Recovery ROM ကို Flash လုပ်ဖို့ရန်အတွက် နည်းလမ်းနှစ်ခုရှိပါတယ်။ တခုကတော့ MIUI ROM မှာပါဝင်တဲ့ Updater Apps မှတဆင့် Flash လုပ်တာဖြစ်ပြီး တခြားနည်းလမ်းတခုကတော့ Mi Recovery (သို့မဟုတ်) Others Custom Recovery တို့မှ Flash လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါနည်းလမ်းဟာ Update လုပ်ခြင်းကိုသာ ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီး Downgrade ပြုလုပ်ခြင်းကိုတော့ ဆောင်ရွက်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လက်ရှိ မိမိဖုန်းမှာ Installed လုပ်ထားတဲ့ MIUI Vesion ဟာ မိမိ Download လုပ်ထားတဲ့ MIUI ROM version ထပ်မြင့်နေရပါမယ်။ နိမ့်နေရင်တော့ Recovery ROM နဲ့ Flash လုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီနေရာမှာတခုပြောစရာရှိတာက နောက်ပိုင်းထွက်ရှိလာတဲ့ Xiaomi Devices တွေမှာ Bootloader Locked တွေဖြစ်တဲ့အတွက် Recovery အသုံးမပြုခင် Bootloader Unlock ပြုလုပ်ဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်။
Updater Apps ကိုအသုံးပြုပြီး Flash လုပ်ခြင်းဆိုတာ?
Updater Apps မှတဆင့် MIUI ROM package file ကို Flash လုပ်ခြင်းနည်းလမ်းကတော့ ရိုးရှင်းပါတယ်။ Download လုပ်ပြီးရရှိလာတဲ့ Recovery ROM ကို မိမိဖုန်းရဲ့ မည်သည့် Folder အောက်တွင်မဆိုထားနိုင်ပါသည်။ ပြီးနောက် Updater Apps ကိုဖွင့်ပါ။ အပေါ်ဘက်ညာဘက်အစွန်မှ Menu (Line ၃ ခုနဲ့ Button) ကိုနှိပ်ပါ။ Choose Update Package ကိုနှိပ်ပါ။ မိမိ Download လုပ်ထားသော Recovery ROM package file ကို ရွေးပေးပြီး Flash လုပ်ရုံပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Mi Recovery အသုံးပြု၍ Flash လုပ်ခြင်းဆိုတာ?
ဒီနည်းလမ်းကလည်း ရိုးရှင်းပါတယ်။ Download လုပ်ပြီးရရှိလာသော Recovery ROM package file ကို မိမိဖုန်းရဲ့ Internal Storage (Root folder) အောက်မှာထားပါ။ ထို့နောက် မိမိဖုန်းကို Recovery Mode (Vol+ + Power Button) (သို့မဟုတ်) Updater Apps မှတဆင့် Reboot to Recovery ကိုနှိပ်ပြီး Recovery Mode သို့ဝင်ပါ။ Mi Recovery သို့ရောက်ရှိပါက Install update.zip ကိုရွေးပြီး Flash လုပ်နိုင်ပါသည်။
Fastboot ROM ဖြင့် Flash လုပ်ခြင်းဆိုတာ?
Fastboot ROM ဖြင့် Flash လုပ်တာကတော့ Computer တလုံးလိုအပ်ပါတယ်။ ထို့နောက် မိမိအသုံးပြုမည့် ကွန်ပျူတာမှာ Mi Flash Tool ကို Installed လုပ်ပါ။ ထို့နောက် Mi PC Suite ကိုလည်း Installed လုပ်ပါ။ ဒီနေရာမှာတခုပြောလိုတာက Mi PC Suite နဲ့ Flash လုပ်ခြင်းဟာ flash_all command ကို တိုက်ရိုက်အသုံးပြုတာဖြစ်တဲ့အတွက် Data မပျက်ပဲ ROM Flash လုပ်ချင်သူများအတွက် အဆင်မပြေပါဘူး။ မိမိဖုန်းကို Power Off ပါ။ Power + Vol – ကို ဖိပြီး Fastboot Mode ကိုဝင်ပါ။ ထို့နောက် မိမိဖုန်းကို ကွန်ပျူတာဖြင့်ချိတ်ဆက်ပြီး Flash လုပ်နိုင်ပါသည်။ Fastboot ROM မှာ မတူညီတဲ့ Fastboot ROM flash script file (၃) မျိုးစီ Language နှစ်ခုနဲ့ ပါဝင်ပါတယ်။ တခုက (.bat file format) နဲ့ဖြစ်ပြီး Windows PC အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တခုကတော့ (.sh file format) နဲ့ Linux PC အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာတခုပြောလိုတာက Fastboot ROM ကို Fastboot Mode မှ Flash လုပ်ဖို့အတွက် မိမိဖုန်းဟာ Bootloader Locked ဖြစ်နေခဲ့ရင် Unlock ပြုလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ရင်လည်း Qualcomm Jig ကဲ့သို့ Hardware Method အသုံးပြု Flash Cable ဖြင့် Qualcomm 9008 Mode အသုံးပြုပြီး Flash နိုင်ပါသည်။ MediaTek Device ဖြစ်ပါကလည်း SP Flash Tool ဖြင့် Flash လုပ်နိုင်ပါသည်။
မတူညီသော Flash Script file (၃) မျိုးဆိုတာ?
၎င်းကိုအသုံးပြုပြီး Flash လုပ်ပါက ဖုန်းအတွင်းသို့ ROM file အသစ်မတင်ခင် ဖုန်းကို Wipe (Clean) လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ User data အပါအဝင်ဖုန်းမှာရှိသော Data အားလုံးကို Removed ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း flash script ကို MIUI ROM အမြင့်မှ အနိမ့်သို့ပြန်ဆင်းချင်လျင်သော်လည်းကောင်း၊ MIUI ROM ကို အသစ်စတင်အသုံးပြုလိုလျင်လည်းကောင်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
၎င်းကိုအသုံးပြုပြီး Flash လုပ်ပါက မိမိဖုန်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ Applications အားလုံးကို Removed ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီး သင့်ရဲ့ Personal files တွေကိုတော့ ဖျက်ပစ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ၎င်း flash script ကို MIUI ROM အမြင့်မှအနိမ့်သို့ ပြန်ဆင်းချင်သူများအတွက်လည်းကောင်း၊ Personal file (data) တွေကိုမထိခိုက်စေပဲ ROM အသစ်တင်ပြီး ဖုန်းတွင် Installed လုပ်ထားတဲ့ Applications တွေကိုဖျက်ပစ်ချင်လျင်သော်လည်းကောင်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
၎င်းကိုအသုံးပြုပြီး Flash လုပ်ပါက မိမိဖုန်းအတွင်းရှိ Applications များအပါအဝင် မည်သည့် User data ကိုမျှထိခိုက်ခြင်းမရှိစေပဲ ROM အသစ်ကို Flash လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းကိုတော့ မည်သည့် Data ဆုံးရှုံးမှုမှမဖြစ်စေပဲ MIUI ROM အသစ်တင်လိုသောသူများအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Posted on February 10, 2017 December 22, 2018
MIUI Update ကို ဘယ်လိုလုပ်ရသလဲ? မိမိဖုန်းမှာ MIUI Latest Update ဘာကြောင့်မရတာလဲ?
Xiaomi ရဲ့ MIUI ဆိုတာတကယ်တော့ Update တွေနဲ့အရမ်းအသုံးပြုလို့ကောင်းတဲ့ Redefined Android တစ်မျိုးပါ။ MIUI ROM version “Alpha” ကနေစတင်ပြီး Stable ROM ထိကို တဆင့်ချင်း၊ အဆင့်ဆင့်ကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဆောင်ပြီး သုံးဆွဲသူ MIUIers တွေကို Update တွေနဲ့ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့် Xiaomi အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် Xiaomi ဖုန်းတစ်လုံးအသုံးပြုပြီဆိုရင် MIUI Beta ROM (Develpoer ROM) ဆိုရင် တစ်ပါတ်တစ်ခါပုံမှန် Update လုပ်ပေးဖို့လိုအပ်သလို၊ MIUI Stable ROM တွေဆိုရင်လည်း (၂) လတစ်ကြိမ် (ပုံမှန်အားဖြင့်) Update ထုတ်ပေးရင်လုပ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Update ဆိုတာဘာလဲဆိုတာရယ်၊ Update ဘယ်နှစ်မျိုးရှိတယ်ဆိုတာရယ်၊ Update ဘယ်လိုရယူနိုင်တယ်ဆိုတာလေးကို Myanmar MIUIers များအတွက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
MIUI ROM အတွက် Features အသစ်တွေထပ်မံထည့်သွင်းဖို့နဲ့ MIUI Bugs (Error) တွေကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက် ယေဘုယျအားဖြင့် MIUI Team ဟာ Updater Apps မှတဆင့် Update တွေထုတ်ပေးပါတယ်။
Different Types of ROM updates:
MIUI ROM Update အမျိုးအစားကွဲတွေရှိပါတယ်။ ဘာတွေလည်းဆိုတော့ –
MIUI Alpha ROM Update:
MIUI Nightly ROM Update (or) Beta ROM Update
MIUI Developer ROM Update (or) Stable ROM Update
MIUI Alpha ROM ဆိုတာ MIUI Tester များ Testing လုပ်ဖို့အတွက် MIUI Developer Team မှ ပထမဦးဆုံးကြိုတင်ထုတ်ပေးတဲ့ MIUI ROM တမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း ROM အတွက်နေ့စဉ် Update (Daily Update) ထုတ်ပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့် ၎င်း ROM မှာပဲ Features အသစ်တွေကိုပထမဦးဆုံးရရှိသလို သာမာန်အသုံးပြုသူအတွက်အဆင်မပြေနိုင်တဲ့ Bugs (Error) တွေလည်းပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ ၎င်း Alpha ROM Update ကို အပါတ်စဉ် တနင်္လာနေ့ကနေ သောကြာနေ့အထိထုတ်ပေးပေးပါတယ်။ ဒီနေရာမှာတခုပြောလိုတာက အခြေခံအားဖြင့် Alpha ROM ဆိုတာ ပုံမှန်အားဖြင့် Public ပေးသုံးတာမျိုးမဟုတ်ပဲ အသုံးပြုခွင့်ရရှိတဲ့ Tester များသာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
MIUI Nightly (or) Beta Update:
MIUI Nightly or Beta ROM Update ကို အပါတ်စဉ် တနင်္လာနေ့ကနေ ကြာသပတေးနေ့အထိထုတ်ပေးတာဖြစ်ပြီး သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့အသုံးပြုသူများသာ (Only Forum Special Team Members) အသုံးပြုလို့ရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း Nightly Update တွေဟာ အပါတ်စဉ် သောကြာနေ့တိုင်းထုတ်ပေးနေကျဖြစ်တဲ့ MIUI Beta Update (Developer ROM) မထုတ်လုပ်ပေးခင်မှာထုတ်ပေးတဲ့ Testing လုပ်ရန်ထုတ်လုပ်ပေးတဲ့ ROM Update ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Nightly ဆိုတာ စမ်းသပ်အသုံးပြုဖို့ ROM ဖြစ်ပါတယ်။
MIUI Developer (or) Stable Update:
MIUI Developer (or) Stable ROM Update ဆိုတာအားလုံးလွတ်လပ်စွာအသုံးပြုဖို့ထုတ်လုပ်ပေးတဲ့ Public ROM ဖြစ်ပါတယ်။ MIUI Developer ROM Update ကို အပါတ်စဉ် တစ်ပါတ်တစ်ခါထုတ်လုပ်ပေးတာဖြစ်ပြီး MIUI Stable ROM Update ကိုတော့ ပုံမှန်အားဖြင့် (၂) လတစ်ကြိမ်ထုတ်လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ မည်သူမဆို ၎င်း ROM Updates များကိုရယူအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
အမေး : MIUI updates ကိုဘယ်လိုရရှိမလဲ?
MIUI Alpha ROM ကို မိမိရဲ့ Device မှာ Flash လုပ်ပါ။ မိမိရဲ့ Mi Account ကို Sign In လုပ်ပါ။ Alpha ROM Update ကို Alpha ROM အသုံးပြုခွင့်ရရှိသူတိုင်း အပါတ်စဉ်နေ့တိုင်း Update ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Alpha ROM အသုံးပြုခွင့်ရရှိသူသာလျှင် ပုံမှန် MIUI OTA (On The Air) Update ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
MIUI Developer ROM ကို မိမိရဲ့ Device မှာ Flash လုပ်ပါ။ မိမိရဲ့ Mi Account ကို Sign In လုပ်ပါ။ MIUI Developer ROM အသုံးပြုသူများထဲကမှ Beta Daily Update (Nightly Update) အသုံးပြုခွင့်ရရှိသူ (Special Team Members) များသာ Nightly Update ကိုပုံမှန်အပါတ်စဉ် တနင်္လာနေ့မှ ကြာသပတေးနေ့ထိရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
MIUI Developer ROM ကို မိမိရဲ့ Device မှာ Flash လုပ်ပါ။ ၎င်း Update ကို အပါတ်စဉ်တစ်ပါတ်တစ်ခါ သောကြာနေ့တိုင်းထုတ်ပေးပါသည်။ (မှတ်ချက်။ MIUI Developer ROM (or) Beta ROM သည် တပတ်တကြိမ် (Weekly Update) Update လုပ်ပြီးအသုံးပြုရသော ROM ဖြစ်တဲ့အတွက် Normal Users များနှင့် Weekly Update မလုပ်သောသူများ အသုံးပြုရန်မသင့်ပါ။)
MIUI Stable ROM ကို မိမိရဲ့ Device မှာ Flash လုပ်ပါ။ MIUI Stable Update ကိုတော့ (၂) လမှာတစ်ကြိမ်ပုံမှန်အားဖြင့်ထုတ်လုပ်ပေးပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေမှာတော့ အရေးကြီးတဲ့ Bugs (Error) ရှိလို့ဖြေရှင်းဖို့ရန်အတွက် ရံဖန်ရံခါ (၁) လအတွင်း Update ထုတ်ပေးပါတယ်။
မေးခွန်း : MIUI China ROM ဆိုတာဘာလဲ? နှင့် MIUI Global ROM ဆိုတာဘာလဲ?
MIUI China ROM ဆိုတာကတော့ ပုံမှန်အားဖြင့် တရုတ်လူမျိုးများအသုံးပြုဖို့အတွက် အဓိကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ROM ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း ROM မှာ ကြိုတင်ထည့်သွင်းထားတဲ့ Google Apps နဲ့ Google Services တို့မပါဝင်ပါဘူး။ ပါဝင်တဲ့ဘာသာစကားကိုလည်းကန့်သတ်ထားပါတယ်၊ တရုတ်ဘာသာစကား (၂) ခုနဲ့၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား (၁) တခုသာပါဝင်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ၎င်း MIUI China ROM မှာ MIUI Apps Market နဲ့ ထူးခြားတဲ့ Features တွေတော့သီးခြားပါဝင်ပါတယ်။
MIUI Global ROM ဆိုတာကတော့ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးမှာရှိတဲ့ Xiaomi အသုံးပြုသူများ၊ MIUI အသုံးပြုသူများအတွက်အထူးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ROM ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း ROM မှာ ကြိုတင်ထည့်သွင်းထားတဲ့ Google Apps နဲ့ Google Services တို့ပါဝင်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း ROM မှာ ဘာသာစကားတော်တော်များများ (Translated by MIUI Translation Team) ကိုထောက်ပံ့ပေးထားပြီး ထူးခြားတဲ့ Features အချို့လည်းပါဝင်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် MIUI Global ROM ကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့် စိစစ်ခြင်းကို Google က အဓိကလုပ်ဆောင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။
မေးခွန်း : MIUI Developer ROM တင်ထားတဲ့ Device မှာ MIUI Stable ROM Update ရရှိနိုင်ပါသလား?
မရနိုင်ပါဘူး။ မိမိတို့ Device မှာတင်ထားတဲ့ သက်ဆိုင်ရာ MIUI ROM ရဲ့ Update ကိုသာရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ MIUI Developer ROM မှာ MIUI Stable ROM Update မရရှိနိုင်သလို MIUI Stable ROM မှာလည်း MIUI Developer ROM Update ကိုမရရှိနိုင်ပါဘူး။
မေးခွန်း : Update ထုတ်ပေးပြီးဖြစ်သော်လည်း ဘာကြောင့် Updater Apps မှာ Update မပေါ်ရတာလဲ?
ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ MIUI ROM Update မှာ အရေးကြီးတဲ့ Bugs (Error) သို့မဟုတ် အခြားအရေးကြီးပြင်ဆင်မှုမျိုးပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်ခဲ့ပါက MIUI Developer Team ကနေပြီးတော့ ၎င်း Update ကို ပြန်လည်ရုတ်သိမ်းမှုပြုလုပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Update ရုတ်သိမ်းမှုမျိုးပြုလုပ်ပါက ၎င်း Update ကို MIUI Updater Apps မှာမြင်တွေ့ရဦးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပြီး Update ထပ်မံတင်ပေးမှသာ မြင်ရမည်ဖြစ်ပြီးအသုံးပြုလို့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
(တခါတလေမှာ Server Load များလွန်းတဲ့အတွက် Update ဆွဲမရတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။)